Wararka Maanta: Talaado, Aug 14, 2018-Wasiir Cawad : Madaxda dalka wey ku howlan yihiin sidii loo dhameyn lahaa khilaafka Eritrea iyo Jabuuti
Talaado, August, 14, 2018 (HOL)–Wasiirka wasaarradda arrimaha dibedda ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ku howlan tahay sida uu hadalka u dhigay in ay dhax-dhaxaadiso dowladdaha Eritrea iyo Jabuuti.
Shalay waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wasiirka arrimaha dibedda Eritrea Cismaan Saalax iyo wafdi uu horkacayo oo kulamo kala duwan la yeeshay madaxda ugu sareysa dalka, gaar ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Mar uu wasiirka arrimaha dibedda Soomaliya ka hadlayay booqashada wafdiga Eritrea ayuu sheegay in ay jawaab u tahay safarkii uu dhawaan madaxweyne Farmaajo ku tagay magaalada Asmara iyo xoojinta xiriirka labada dowladdood.
Dhinaca kale, wasiirka oo la hadlay warbaahinta gudaha kana jawaabayay su’aal aheyn walaaca Jabuuti ay ka qabto xiriirka Soomaaliya ee Eritrea ayuu sheegay madaxda dowladdu ku howlan yihiin sidii loo wada hadashiin lahaa labada dowladood Jabuuti iyo Eritrea.
‘’Markii uu tagay Asmara madaxweyna-heennu wax waay-bihii uu kala hadlay Eritrea waxaa ka mid ahaa waxa ay tabanayaan walaalaheenna Jabuuti, waxaana socda daallo ay ku howlan yihiin madaxda ugu sareysa dalka oo ah sidii loo dhameyn lahaa khilaaf labada dhinac’’ ayuu yiri Wasiirka.
Dowladda Jabuuti ayaa walaac xoog leh ka muujisay hadalkii Madaxweyne Farmaajo ka sheegay Asmara ee ahaa in laga qaado Eritrea cunaqabateynta saaran, iyadoo Jabuuti iyo Eritrea ay dhex taalo xiisad ka dhalatay muran dhinaca xudduuda ah.